Xareey Wargelin Cusub
Geli Magaca Hay'ada
Dabagal wargelinta horay u jirtay
Siinaya magac la'aanta, qadadka qarsoodiga ee hay'adaha oo caalamka oo dhan.
Hadafka NAVEX Global' waa hubinta inaad kala hadli kartid arimaha iyo walaacyada la xiriiro anshax darada ama howlaha sharci darada si badbaado ah oo aaminaada maamulka hay'ada ah leh ama guddiga agaasimayaasha iyada oo la joogteynayo magac la'aanta iyo qarsoodiga.
NAVEX Global waa Dakad Badbaado ah ee lagu Xaqiijiyay dhinaca Waaxda Ganacsiga Mareykanka sida bixiyaha qadka ee leh cabirida amniga ee lagu sheegayo barnaamijyada arimaha gaarka ah ee EU iyo tilmaamaha kale ee arimaha gaarka caalamka.
Waxaan ku dadaalnaa sameynta aruimaha wargelinta iyo walaacyada oo dhinaca EthicsPoint™ sida tooska iyo aan adkeyn sida suurtogalka ah. Boggaga webka xigga wuxuu kugu jaheynayaa dhinaca nidaamka iyada oo la joogteynayo qarsoodigaada iyo magac la'aanta ee tallaabo walba. Raac tallaabooyinkaan lagu xareynayo wargelintaada:
Geli magaca hay'ada ee aad gudbineysid wargelinta oo dooro dooqa saxda ah
Riix Qeybta Xadgudubka ee sida wanaagsan u sharaxdo arinta aad wargelineysid
Ogolow "Xeerarka iyo Sharuudaha" kadib buuxi foomka
Ka hor inta aadan gudbin wargelintaada, aasaas sirta lagu daba galayo wargelintaada.
Kadib markaad gudbisid wargelintaada, waxaa laguu xilsaarayaa furaha wargelinta. Sirtaada iyo furaha wargelinta waxay kuu ogolaanayaan inaad dabagashid wargelintaada.